Tarehimarika avy amin’ny CENI :: Mbola kandidà valo amby dimampolo sy telonjato no nirotsaka manerana ny Nosy • AoRaha
Tarehimarika avy amin’ny CENI Mbola kandidà valo amby dimampolo sy telonjato no nirotsaka manerana ny Nosy
Kandidà miisa valo amby dimampolo sy telonjato no nanatitra ny antontan-taratasy firotsahan-kofidiana eny anivon’ireo rantsa-mangaikan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) manerana an’ireo distrika miisa sivy ambin’ny folo amby zato eto Madagasikara. Araka ny tatitra nataon’ny Ceni, omaly, dia kaominina dimy amby sivifolo sy roanjato amin’ireo dimy amby sivifolo sy eninjato sy arivo no naharaisana an’ireo firotsahan-kofidiana ireo.
Roa amby roapolo amby zato kosa ny antontan-taratasy voaray avy amin’ireo kandidà ho mpanolontsaina ny kaominina eto Madagasikara amin’ireo kaominina dimy amby zato nirotsahany. Ora vitsy sisa dia hikatona tanteraka ny fametrahana an’ireo antontan-taratasy firotsahan-kofidian’ireo kandidà hiatrika ny fifidianana ben’ny tanàna, amin’ny 27 novambra 2019 ho avy izao.
Manoloana ny mety tsy hisiana kandidà amina kaominina sasany eto Madagasikara dia nambaran-dRandriamanantsoa Philibert Hervé, filoha lefitry ny Ceni, fa: “tokony haka ny hevitry ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) ny governemanta aorian’ny famoahan’ny Fitsarana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana ny voka-pifidianana ofisialin’ity fifidianana ity”. “Miankina amin’izany valin-tenin’ny HCC izany no hanaovana fifidianana amin’ny ampahany na tsia”, hoy izy.
Aza mihinana am-bolony…